रोज्नुहोस् ढाँचा - फन्टहरू
तपाईँ फन्टहरू चलहरू, प्रकार्यहरू, सङ्ख्याहरू र घुसाइएको पाठका लागि परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ जुनले तपाईँको सूत्रको तत्वहरू उत्पादन गर्दछ ।
सबै तत्वहरूका लागि फन्टहरू संवादमा सूची बाकसहरूले एउटा पूर्वनिर्धारित फन्ट प्रर्दशन गर्दछ । फरक फन्टमा परिवर्तन गर्न, परिमार्जन गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि तत्व प्रकार चयन गर्नुहोस् । एउटा नयाँ संवाद बाकस देखा पर्दछ । आवश्यक फन्ट चयन गर्नुहोस् र कुनै आवश्यक विशेषताहरू जाँच गर्नुहोस्, त्यसपछि ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् । परिवर्तनहरूलाई पूर्वनिर्धारितको रुपमा सेट गर्न, पूर्वनिर्धारित बटन क्लिक गर्नुहोस् ।
यदि तपाईँले सम्पूर्ण पाठका लागि प्रयोग गरिएको भन्दा अन्य फन्ट सँग बेग्ला बेग्लै पाठ खण्डहरू चिन्ह लगाउन चाहनुहुन्छ भने, फन्ट आदेशलाई आदेश सञ्झ्यालमा प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
तपाईँको सूत्रमा चलहरूका लागि तपाईँ फन्टहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ. उदाहरणका लागि, सूत्रमा x=SIN(y), x र y चलहरू हुन्, र प्रदान गरिएको फन्ट फर्काउँदछ ।
प्रकार्यहरूको नामहरू र गुणहरूका लागि फन्टहरू चयन गर्नुहोस्.उदाहरणका लागि, सूत्रमा प्रकार्य x=SIN(y) are =SIN( ).
तपाईँले तपाईँको सूत्रमा फन्टहरूको सङ्ख्या चयन गर्न सक्नुहुन्छ.
यहाँको सूत्रमा पाठका लागि फन्टहरू परिभाषित गर्नुहोस्.
यो सेक्सनमा फन्ट संवादको तपाईँ फन्टहरू परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ, जुन सँग तपाईँ सूत्रमा अन्य पाठ अवयवहरू ढाँचा गर्न सक्नुहुन्छ. तीन आधारभूत फन्टहरू सेरिफ, स्यान्स र स्थिर उपलब्ध छन्. तपाईँ कुनै अन्य फन्ट प्रत्येक स्ट्यान्डर्ड स्थापित आधारभूत फन्टमा थप गर्न सक्नुहुन्छ. प्रत्येक फन्ट जुन तपाईँको प्रणालीमा स्थापित भएको थियो तपाईँलाई प्रयोग गर्नका लागि उपलब्ध छन्. चयन गर्नुहोस् परिमार्जन बटन सूची बाकसमा चयन प्रस्ताव विस्तार गर्नका लागि
यी अनुकूल फन्टरहु प्रयोग हुन्छ यदि तपाईँले बिभिन्न फन्ट FONT आदेश सँग आदेश सञ्झ्यालहरू सँग सेट गर्नुभयो भने ।
तपाईँ फन्ट निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ जुन प्रयोग गर्नका लागि फन्ट सेरिफ ढाँचामा. सेरिफहरू सानो "guides" हुन् जुन हेर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, क्यापिटल A को तल जब समय सेरिफ फन्टहरू प्रयोग हुन्छ. सेरिफको प्रयोग केही महत्वपूर्ण छ जुनले सिधा पङ्क्तिको पाठकको आँखामा मार्गदर्शन गर्दछ र पढाइको गति बढ्न सक्दछ ।
तपाईँ फन्ट निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ sans फन्ट ढाँचाको प्रयोगका लागि.
तपाईँ फन्ट निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ fixed फन्ट ढाँचाको प्रयोगका लागि.
यो पप-अप मेनुबाट एउटा छनौटहरू क्लिक गर्नुहोस् फन्ट संवाद पहुँचका लागि, जहाँ तपाईँ सम्बन्धित सूत्रका लागि फन्ट र विशेषताहरू परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ र अनुकूल फन्टहरूका लागि
सबै नयाँ सूत्रहरूका लागि पूर्वनिर्धारितको रूपमा तपाईँको परिवर्तनहरू बचत गर्नका लागि यो बटन क्लिक गर्नुहोस्. परिवर्तनहरूको निश्चित पछि, क्लिक गर्नुहोस् ठीक बटन.